kooxaha Hogaaminaya Horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sidee u dabaal degi karaan %
Waxaan idiin soo gudbineynaa Warbixin aan ku eegeyno Kooxaha kala duwan ee Hogaanka u haya Horyaalada ugu Sareeya qaarada yurub kuwaas oo qaarkood ay u dabaal dagi doonaan ku Guuleysiga Horyaalka Goordhow maadaama ay dhibco fara badan ku Hogaaminayaan.
Hadaba aan ku hor marno Horyaalka
Horyaalka Premier League dalka England waxaa Hogaamineysa kooxda Manchester City waxayna u dabaal dagi kartaa Horyaalka ay badiyaan kulanka darbiga ah ee 7 da bisha April ay lacayaari doonaan Manchester United.
Manchester City waxaa kaloo laga doonayaa in ay badiyaan kulanka Everton oo ka soo horeeya kan Manchesyter United waxaana ay qarka u saaranyihiin in ay qaadaan Horyaalka.
Sidoo kale Waxaa jira herdan adag oo u dhexeeya kooxaha doonaya in ay xiliga danbe Cayaaraan koobka Champions League waxaana laxaqiijiyey Man City iyo Man United lahubo booskooda balse waxaa is haysta kooxaha Tottenham Liverpool iyo Chelsea halka ay Arsenal rajo la aan tahay.
Qaybta Hoose waxaa u dhow in ay laabato West Brom balse Kooxaha Stoke (27 points) Southampton (28 points) West Ham, Crystal Palace, Huddersfield, Swansea, Newcastle iyo Brighton.ayaa dhamaantood mid kastaa u laaban kartaa heerka labaad.
Kooxda PSG ayaa u dabaal dagi doonta Horyaalka France hadii ay badiyaan kulanka ay 15 ka bisha April la cayaari doonaan kooxda Monaco kaas oo ka dhici doona garoonka Parc des Princes waxaase ka horeeya Cayaar adag oo ay ladheeli doonaan St Etienne.
Kooxda Kubada cagta Bayren Munich ayaa u dabaal dagi doonta Horyaalka dalka Jarmalka iyada oo ay dhimantahay 7 Cayaarood waxaana Macalin Heynckes jabin karayaa Recordkii Pep Guardiola kaas oo Bayren Munich u qaaday Horyaalka iyada oo ay dhimantahay 7 Cayaarood.
Horyaalka dalka Talyaanigu waa kan kaliya ee lagu Hogaaminayo 2 dhibcood waana kan kaliya ee laysla Gaari karo Todobaadka ugu danbeeya Juventus ayaa 2 dhicood oo kaliya ka saraysa Napoli waxaana aan la qiyaasi karayn kooxda qaadi doonta iyo xiliga loo dabaal degi doono.
Cristiano Ronaldo oo afar kooxood waa wayn ka Goolal badanyahay